GMDQ OO SOO GEBA-GEBEEYAY KORMEERKII XISBIYADA SIYAASADDA – GMDQ
GMDQ OO SOO GEBA-GEBEEYAY KORMEERKII XISBIYADA SIYAASADDA
Taariikhda markey aheyd 12 ilaa iyo 13/01/2019 Guddiga Madaxbannaan ee Doorashooyinka Qaranka waxay soo kormeereen Lix xisbi siyaasadeed oo heystey shahaadaha kumeelgaarka ah.
Xisbiyada la kormeerey ayaa kala ahaa, xisbiga NABADA xisbiga SAMADOON, xisbiga U HIILI DADKAAGA ,xisbiga HIMILO QARAN ,xisbiga DHAL DHIS iyo xisbiga SHACABKA.
Cabdriraxmaan Cusmaan Aadan oo ah Xubin ka mid ah Guddiga Madaxbannaan Ee Doorashooyinka Qaranka ahna hormuudka kormeerka xisbiyadda, sarkaal ka tirsan xafiiska diiwaangeliyaha xisbiyada Maxamed Maxamud Xasan (Sandheere) , iyo Agaasimaha sharciyada Cabdi Nasir Maxamed Xirsi ayaa guud ahaan soo kormeerey xafiisyada xisbiyada sida kumeelgaarka ah loo diiwaangeliyey.
Kormeerka ayaa bilowdey 06/01/2019, wuxuuna soo idlaadey 13/01/2018 waxaana la soo kormeeray ilaa iyo 32 xisbi siyaasadeed ka dib markii xisbiyada ay qaateen shahaadada KMG ah lana doonaayo in xisbi walbo uu ku guuleysto nidaamka buuxinta sharuudaha xisbi dhameystiran si loogu gudbo nidaamka xisbiyo dhameystiran ee gudan kara waajibaadkooda guud. Diiwaangeliya xafiiska xisbiyada Maxamed Maxamud Xasan ( Sandheere) wuxuu xisbi walbo weydiiyey suaalo ku saabsan hab dhaqanka xisbiyada, xeerka shaqaalaha, hab raaca saraakiisha la magacaabey, qorsho howleedkooda. xubintinimada xisbiga, dariiqa loo maro iscasilaada xubintinimada xisbiga iyo xisaabxirka ay sameeyaan xisbi walbo sanadkiiba mar; halka uu agaasimaha sharciyada Cabdinaazir uu qaabilsanaa dhanka hubinta sharciyada iyo dukumintiyada xisbiga KMG ah.
Inkastoo aysan wada buuxin adeega looga baahnaa xisbi walbo hadana wax bey ka faaiideen kormeerida, waxaana looga fadhiyaa inay iska saxaan buuxiyaana dukumintiyada ka maqan taasoo la’aantooda aysan u suuragaleynin inay u gudbaan nidaamka xisbiyo dhameystiran.
Ugu dambeyn hormuudka kormeerida xisbiyada Cabdriraxmaan Cusmaan Aadan oo ah Xubin ka mid ah GMDQ ayaa kula taliyey xisbi walbo in ay u istaagaan kor u qaadida tayadooda si ay u noqdaan xisbiyo qaran oo ka qeyb qaadan kara doorashada loo madlanyahay 2020ka.
Kormeerka ka dib, xafiiska diiwaan geliyaha xisbiyada siyaasadda ee GMDQ, waxa uu diyaarin doona warbixin faah-faahsan oo xisbiyada loogu caddeyn doono gaabisyada ku jira iyo sidoo kale talooyin u suurta geliya in ay hana-qaadaan oo ay waddanka u horseedaan nidaamka axsaabta badan.
Waxaa la faafiyey January 14, 2019 January 14, 2019